Inkundla Ephakamileyo Yobulungisa Antonin Scalia - Ukuphila Kwakhe Nokufa
U-Justice Scalia wayenomqondo ocacileyo wokulungileyo nokungalunganga
Nangona indlela yokujongana neNkundla ePhakamileyo yezoBulungisa u-Antonin Gregory "I-Nino" i-Scalia yayithathwa njengeyona yezinye iimpawu ezingathandekiyo, yatsho ngokucacileyo ukuqonda kwakhe okulungileyo nokungalunganga. Ekhuthazwa yinkomfa yokuziphatha eqinile, uSalalia wayechasene nenkululeko yokugweba kuzo zonke iifom, ukulungiswa endaweni yokugwetyelwa komgwebo kunye nendlela yokwakha ekuchazeni uMgaqo-siseko. U-Scalia uthe ngezihlandlo ezininzi ukuba amandla eNkundla ePhakamileyo iyasebenza kuphela njengoko imithetho eyenziwe yiCongress.
Ubomi bokuQala bokuQala kunye neMinyaka eQulunqisayo
U-Scalia wazalwa ngoMatshi 11, 1936, eTrenton, eNew Jersey. Wayenguye yedwa unyana ka-Eugene noCatherine Scalia. Njengesizukulwana sesibili saseMelika, wakhula kunye neendawo zasekhaya zaseTaliyane ezinamandla kwaye wakhuliswa ngamaRoma Katolika.
Intsapho yathuthela eQueens xa uScalia engumntwana. Waphumelela okokuqala eklasini yakhe evela kuSt. Francis Xavier, isikole samandulo esikolweni eManhattan. Waphumelela okokuqala eklasini yakhe kwiYunivesithi yaseGeorgetown ngegriki kwimbali. Uthole umgangatho wezomthetho waseHarvard Law School, apho waphinda waphumelela khona.
Umsebenzi wokuqala ka-Scalia ngaphandle kweHarvard wayesebenza kumthetho wezorhwebo kwenkampani yamazwe ngamazwe kaJones Day. Wahlala khona ukususela ngo-1961 ukuya ku-1967. Ukunyuka kwezemfundo kwamenza waba nguprofesa we-University kwiYunivesithi yaseVirginia ukususela ngo-1967 ukuya ku-1971. Waqeshwa isiluleko esiphezulu se-Ofisi yeTe Telecommunications phantsi kolawulo luka-Nixon ngowe-1971, wachitha ezimbini iminyaka njengosihlalo weNkomfa yoLawulo lwe-US.
U-Scalia wajoyina ulawulo lwe-Ford ngowe-1974, apho wasebenza njengoNcedisi weGqwetha Jikelele kwi-Office of Counsel Counsel.
U-Scalia washiya inkonzo karhulumente ekunyulweni kukaJimmy Carter. Wabuyela esikolweni ngowe-1977 waza wahlala kwindawo ephakamileyo yezemfundo kude kube ngo-1982, kubandakanywa isazi somhlali we-American Enterprise Institute kunye noprofesa wezomthetho e-Georgetown University Law Centre, kwiYunivesithi yase-Chicago School of Law kunye neSyunivesithi yaseStanford.
Kwakhona wakhonza ngokufutshane njengomongameli wequmrhu le-American Bar Association malunga nomthetho wolawulo kunye neNkomfa yeSihlalo seSihlalo. Ifilosofi yecala yokugweba inkundla yaqala ukuqokelela xa uRonald Reagan emmisele kwiNkundla yeziBheno yase-United States ngowe-1982.
Ukutyunjwa kweNkundla ePhakamileyo
Xa uMgwebi oyiNtloko uWarren Burger ethatha umhlalaphantsi ngo-1986, uMongameli uReeagan wakhetha uJaji uWilliam Rehnquist kwindawo ephezulu. Ukuqeshwa kukaRehnquist kwathatha yonke ingqalelo kwiCongress kunye neendaba, kunye neNkundla. Abaninzi bavuya, kodwa abaDemokhrasi bayichasa ngokunyanisekileyo ukuqeshwa kwakhe. U-Scalia wathinjwa nguReagan ukuba agcwalise isithuba kwaye wawela kwinkqubo yokuqinisekisa engabonakaliyo, ejikelezayo ngevoti engu-98-0. AmaSenethi uBarry Goldwater noJack Garn abazange bavotele amavoti. Ivoti yayimangalisa ngenxa yokuba uScalia wayedlulele kakhulu kunanoma yiyiphi enye iNkundla eNkundla ePhakamileyo ngelo xesha.
U-Scalia wayengomnye wabagwebi abawaziwayo kwaye wayedume ngokuba nobuntu bakhe bokudibanisa kunye nefilosofi yakhe yesigqibo "sokuqala" -iyo ngcamango yokuba uMgaqo-siseko kufuneka uguqulelwe ngokwemiqathango yoko kubhekisela kubalobi bawo bokuqala. Watshela i-CBS ngo-2008 ukuba ifilosofi yakhe yokutolika iphathelele ekuqaliseni oko amazwi omGaqo-siseko kunye neYilwayo yamaLungelo athetha kubo abo bawamkela.
U-Scalia wagcinwa ukuba "akayiyo" ingqongqo eyakhayo "nangona kunjalo. "Andiyicingi ukuba uMgaqo-siseko okanye nayiphi na isicatshulwa kufuneka sichazwe ngokuthe ngqo okanye ngokukhawuleza; kufuneka isichazwe ngokucacileyo."
Oonyana bakaScalia, u-Eugene noYohn, basebenzela amafemu awamisela uGeorge W. Bush kwimeko ephawulekayo, uBush v. Gore , owamisela umphumo wokhetho lonyulo luka-2000. I-Scalia yavutha umlilo kumaziko enqabileyo ngenxa yokwenqaba ukuzithethelela ngokwakhe kwimeko. Kwakhona wabuzwa kwakhona kodwa wenqaba ukuzithethelela kwimeko kaHamden v. URumsfeld ngo-2006 kuba wayinikele ngoluvo malunga nomcimbi ophathelene naloo nto ngelixa lilindele. U-Scalia wayexelele ukuba abantu baseGuantanamo abanalo ilungelo lokuvalelwa enkundleni zombuso.
Ubomi Bomntu kunye noBomi boLuntu
Emva kokugqiba iYunivesithi yaseGeorgetown, u-Scalia wachitha iminyaka eYurophu njengomfundi kwiYunivesithi yaseFribourg eSwitzerland.
Wadibana noMaureen McCarthy, umfundi weNgesi waseRaccffe, eCambridge. Ngo-1960, batshata ngo-1960 kwaye banabantwana abasithoba. U-Scalia wayekhusele ngokukhuselekileyo kwintsapho yakhe kwirejista kwiNkundla ePhakamileyo, kodwa waqala ukunikezela udliwano-ndlebe ngo-2007 emva kweminyaka engavumi ukwenza njalo. Ukuzimisela kwakhe ngokukhawuleza ukubandakanya amajelo kubangelwa kukuba abantwana bakhe bonke babe ngabantu abadala abadala.
U-Scalia wasweleka ngoFebruwari 13, ngo-2016, kwisiqephu se-ranch entshonalanga eTexas. Wahluleka ukubonakala ngesidlo sakusasa ngolunye usuku kusasa kwaye umqeshwa wesihlengwa waya ekamelweni lakhe ukuze amkhangele. U-Scalia wafunyanwa ebhedini, wafa. Wayeyaziwa ngokuba neengxaki zentliziyo, ukufumana isifo sikashukela, kwaye wayenamandla kakhulu. Ukufa kwakhe kwavakaliswa ngenxa yezizathu zendalo. Kodwa nangona eso siganeko sasingenakuphikisana xa amahemuhemu eqala ukugubha ukuba wayebulewe, ingakumbi kuba i-autopsy yayingakaze yenziwe. Oku kwakunzima kwintsapho yakhe, nangona kunjalo-yayingenanto enxulumene nezopolitiko.
Ukufa kwakhe kwavuselela ingqungquthela yokuba umongameli wayenelungelo lokumisela isikhundla sakhe. UMongameli Obama wayekufutshane nokuphela kwekota lakhe lesibini eofisini. Wakhetha uMgwebi u-Merrick Garland, kodwa i-Senate Republican ivimbele ukuqokwa kukaGarland. Ekugqibeleni wawa kuMongameli uTrump ukuba atshintshe uScalia. Wakhetha uNeil Gorsuch kungekudala emva kokuthatha i-ofisi kunye nokuqeshwa kwakhe kwaqinisekiswa yiSenethi ngo-Ephreli 7, 2017, nangona amaDemokhrasi azama u-filibuster ukuyivimba.
Iglosari: Madrassa okanye iMadrasa
I-Conservatives yezombusazwe kunye neNkolo kwizopolitiki
Umongameli weNdlu yangaphambili uNewt Gingrich Biography
Architecture yaseMaya yakudala
Impembelelo yeNyanga kwiSandla sakho seNkwenkwezi
Ngaba Nokuba Nantoni Nokuba Ihambe Ngokukhawuleza Kukho Ukukhawuleza Kokukhanya?
I-Frayer Model yeMathe
Ukudibanana noMninimkhulu uMninimzi uHaniel, Ingelosi Yoyonwaba
Ulawulo lokusetyenziswa kwamaninzi
Izinja njengezithunywa zikaThixo: Iingelosi zezilwanyana, izikhokelo zomoya kunye neengqungquthela
20 Iifayile eziphambili zePunk ze-Decade, 2000-2009
Igama lokuphendula kwi-Organic Chemistry
I-Basics of Numerology